Xasan Sheekh oo qoraal xasaasi ah kasoo saaray xaalada dalka & shirka doorashada - Awdinle Online
Xasan Sheekh oo qoraal xasaasi ah kasoo saaray xaalada dalka & shirka doorashada
“ Qatarta maanta dalka haysata ma aha oo kaliya in hay’adihii fadaraalka ee dalka isku hayay ay sharciyaddii ka dhammaatay ee waxaa kala qeybsan golayaashii sharci dejinta, golihii fulinta ayaa inta badan curyaansan, hay’adihii amniga ayaa qeybsan. Haddaba xaaladda ay ku sugan yihiin hayadaha fadaraalka ayaa keeni karta in nabad geliyada dalka ay qar ka sii dhacdo, taas oo fursad siin karta cadowga. Sidoo kale waxaa qatar ku jirta midnimada dalka oo hay’adaha Federaalku yihiin kuwa isku haya dawladaha xubnaha ka ah dowladda Federaal ka ayaa sidoo kale lagu yiri” Qoraalka Xasan Sheekh.
Ugu dambeyn Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa qoraalkiisa ku sheegay inay ka welwel san yihiin in nidaaamka deyn-cafinta oo muddo siddeed sano ah soo socday uu gebi ahaanba burburo, taas oo ay ka dhalan karaan natiijooyin aan la mahadin oo dhaqaalaha dalka ee lita hoos usii dhiga. Xiriirka hay’adaha, ururrada iyo dowladaha dunida oo dadaal badan lagu bixiyay soo celintiisa marxaladda adag ee uu dalku ku jiro aawgeed.
Previous articleIabedel lagu sameeyay Taliyeyaasha Saldhigyada Booliska Gobolka Banaadir
Next articleShirka wadatashiga doorashooyinka oo meel xasaasi ah maraya & qodobo….